BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/29/20080အကြံပြုခြင်း
၀န်ကြီးရိုက်စ် တရုတ်ငလျင်ကယ်ဆယ်ရေး ချီးကျူးရင်း မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဝေဖန်
"မြန်မာမုန်တိုင်းသင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီခွင့်ရဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကျမတို့ အဘက်ဘက်ကနေကြိုးစားပြီး တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်လို့သာ ကျမတို့ ကူညီခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အသက်တွေ အများကြီးကို ကယ်တင်ခွင့် ရခဲ့မှာပါ။ အခုအချိန်မှာလည်း ကူညီခွင့်ရဦးမယ်ဆိုရင် လူ့အသက်တွေ အများကြီးကို ထပ်ပြီးတော့ ကယ်တင်ကောင်း ကယ်တင်နိုင်ဦးမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ သြဇာညောင်းတဲ့ တရုတ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို ကျမတို့ ဆက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ "တရုတ်မြို့တော် ဘေဂျင်းကနေ ဇီချွမ်ပြည်နယ်ကို မစ္စရိုက်စ်သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလာမယ့် တနင်္လာနေ့ကျရင်တော့ တရုတ်သမ္မတ ဟူချင်တောင်နဲ့ အတူ ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ မြောက်ကိုရီးယားက နယူးကလီယား အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ဘာဆက်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာတွေကို အဓိက ဆွေးနွေး မှာပါ။ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဟာ သူ့ရဲ့ ရွန်ပြောင်း နယူးကလီးယား အအေးခံ ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီးကို သောကြာနေ့ကပဲ ဖျက်ဆီးခဲ့တာမို့ သူတို့ရဲ့ နယူးကလီးယား အစီအစဉ် ဖြတ်သိမ်းရေး ပထမအဆင့် ပြီးဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပဲယင်းရာဇ၀င်ကဗျာ ဖော်ပြတဲ့ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း သတိပေးခံရ
ဇွန်လထုတ် ချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်းက ဒီပရင်္ဂဆိုတဲ့ ကဗျာဟာ လူကြိုက်များခဲ့သလို အရောင်းသွက်ခဲ့ရတဲ့ ချယ်ရီဟာ အခုတော့ စာပေစိစစ်ရေးက သူတို့ရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ ညှိစွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတိုက်က တာဝန်ရှိအယ်ဒီတာတွေကို စာပေစိစစ်ရေးက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သလို ချယ်ရီက အမှုဆောင် အယ်ဒီတာတဦး အလုပ်က နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါ်သင်းသီရိက တင်ပြပေးပါတယ်။
ဒီပရင်္ဂဆိုတဲ့ ပါဠိစကားဟာ အများသိကြတဲ့ ဒီပဲယင်းမြို့ရဲ့ ရှေးသမိုင်းဝင် နာမည်ပါ။ ကဗျာဆရာက ဒီပဲယင်းအစား ဒီပရင်္ဂရယ်လို့ အမည်ပေးရင်း ဒီကဗျာကို စပ်ဆိုခဲ့တာပါ။ ကဗျာထဲမှာ မုံရွာရေဦးလမ်းပေါ်က သမိုင်းဝင် ဒီမြို့ကလေးက မဟာဗန္ဓုလလို သူရဲကောင်းတွေ၊ မုံတိုင်ပင် ဆရာတော် အရှင်ဝံဿ၊ မြသိန်းတန်ဆရာတော် အရှင်ဇိနတို့လို အကျော် အမော် ပုဂ္ဂိုလ်ထူး၊ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေ မွေးဖွားရာ ရှေးသမိုင်းဝင် မြို့ဟောင်းလေးလို့ စပ်ဆိုထားပါတယ်။ အခုတော့ ဒီမြို့မှာ သစ္စာဖောက်တွေ ရှိသလို အမျိုးသမီးတယောက် သေကံမရောက် အသက်မပျောက် ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူငယ်လေး တစ်ယောက်သူ့ဆိုင်ကယ် ကျပျောက်ခဲ့ရတဲ့ မြို့ဖြစ်ပြီလို့ ကဗျာထဲမှာ စပ်ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကဗျာပါတဲ့ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ မူဝါဒ အတိုင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးခွင့်ကျပြီးခါမှ အခုလို ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းက ခေါ်ယူ အပြစ်ပေးခံရတာပါ။ ထုတ်ဝေပြီး နှစ်ပတ်အကြာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၄ရက်နေ့မှာ ချယ်ရီက တာဝန်ရှိတဲ့ အယ်ဒီတာတွေကို စာပေစိစစ်ရေးက ခေါ်ယူပြီး ဒီကဗျာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အယ်ဒီတာကိုဌေးအောင်ကို အလုပ်က ထုတ်ပယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အထိ အပြစ်ပေးတာခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်စာပေသမားတစ်ဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"သူ့ကို ရုံးကခေါ်ပြီးတော့ သတိပေးတယ်။ စိစစ်ရေး ရုံးမှာ တော်တော် ဂယက်ရိုက်နေတယ် စာပေလောကမှာတော့၊ ဒီကဗျာကို တော်တော်ကြိုက်ကြပါတယ်။ ထိတယ်ပေါ့နော် သူတို့၊ ခေါ်ပြီးတွေ့ခံရတယ်။ မြန်မာစာပေလောကထဲမှာ အခုနောက်ပိုင်း ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်မှုတွေကြောင့် စာပေအနုပညာရှင်တွေ အခက်အခဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်း ကိုလည်း သူက ဆက်ပြောပြပါတယ်။
"ဖြုတ်ပယ်တွေ တော်တော်များတယ်။ စာမူတွေ ဖြုတ်တာပယ်တာတွေက တအားလုပ်တယ်။ သူတို့ မဂ္ဂဇင်းဆိုလည်း ရှိသမျှ ကဗျာ ၁၄၊ ၅ ပုဒ်လောက်တင်တာ ၃၊ ၄ပုဒ်ပဲ ကျတယ်။ အရမ်း အဖြုတ်ခံရတယ်။ တခြား မဂ္ဂဇင်းတွေ စာကောင်းပေကောင်းတွေ အဖြတ်အတောက်ခံရတယ်။ စာပေသမားတွေက လွယ်အိတ်လေးလွယ်ပြီး အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ်နဲ့။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အခုတော့ အရင်ကထက် ပိုဆိုးတာပေါ့။"
အခုချယ်ရီ မဂ္ဂဇင်းကို စာပေစိစစ်ရေးက အယ်ဒီတာ အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခိုင်းထားပြီး ထုတ်ဝေခွင့်ကို ပိတ်ပင်တဲ့အထိတော့ အရေးမယူဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အခုချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းကို စာပေစီစစ်ရေးက အယ်တီတာ အဖွဲ့သစ်ပြန်လည်ဖွဲ့ခိုင်းထားပြီး ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့အထိတော့ အရေးယူတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်၊
The price of salt has tripled since Myanmar was hit by almost two months ago by Cyclone Narcs, which damaged salt-producing areas as well as rice fields,amagazine reported Sunday.
The weekly magazine Voice said the price ofaviss of salt _ which is equal to 3.5 pounds (1.6 kilograms) _ had soared at one point to 1,300 kyats (US$1.18), more than six times its pre-cyclone price of 200 kyats (US$0.18).
The price in markets in Yangon, the country's biggest city, has since fallen to about 700 kyats (US$0.63 cents) few weeks after the cyclone, it said.
The magazine reported that more than 1,000 acres (405 hectares) of state-owned salt fields and 23,430 acres (9,482 hectares) of privately owned salt fields were destroyed by the cyclone.
It said salt is produced mainly in the Irrawaddy delta _ the area hardest hit by the May 2-3 storm _ and also in southern Mon and Tanintharyi states and in northwestern Rakhine state.
The price of salt in Rakhine has gone up from 100 kyats (US$0.09) per viss to 400 kyats (US$0.36) as supplies have gotten tight.
To meet the demand, Rakhine state will increase its output during the upcoming October-November salt-production season, the report said, without giving details.
Cyclone Nargis cutaswath of destruction through the delta and the region around the Yangon, killing 84,537 people and leaving 53,836 missing, according to the government.
သီချင်းကြိုးစားသီဆိုပေးတဲ့ မေမဒီ(ကာလီဖိုးနီးယား)ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာဆိုင်ပါနော်..
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/29/2008 1 အကြံပြုခြင်း